Indlela igama umdlwane? Lo magazini, ngokuqinisekile, ngomunye wabokuqala, kuvela sobakovladeltsa ingqondo oluseBhayibhelini ayesanda kuluthola. Indlela ukuxazulula le nkinga siwukuba ube kahle kakhulu, ngoba igama akhethiwe izohlala umdlwane ukuphila, ngoba akukho Kunconywa ukushintsha isidlaliso izinja. Ngakho lokho ukubiza puppy kuya Igama lomnikazi we-kwakumjabulisa futhi kumenza owawuzovumelana isilwane sakhe?
Into yokuqala okufanele niyenze uqiniseke uma wenze iphutha ingane phansi. Ungacabangi ukuthi iseluleko oyisiphukuphuku, njengoba minyaka yonke, izinkulungwane nomdlwana bephoqeleka ukuba ushintshe igama layo, ngokuba, ngokwesibonelo, uStefanu Stephanie, noHezekeli. Futhi kwenzeka kuphela ngoba abanikazi nje akazange uhlupho uhlole lokho ubulili sebewelele isilwane.
Ukuze sithole izimpendulo, ubona umfana noma intombazane wena, uvule ingane yakho ngemuva. Ukuba khona izingono phezu kwesisu ngeke bakutshele lutho, ngoba zikhona kwabesilisa nabesifazane. Ngakho-ke, kumelwe unake nokwakheka esithweni umdlwane. Umfana kuyoba obonakalayo scrotum encane, akhiwe ngezansi nje ingquza, kuyilapho woodcocks besifazane kule ndawo iyoba igebe encane ebonakalayo.
Elinye iphuzu okufanele sicabange ngazo lapho isidlaliso ikhethwa ngoba umdlwane. Khumbula ukuthi cute ibhola lakho Fluffy bayovuka, ukuze izidlaliso ezifana Pushochek noma Baby, maqondana omdala esikhulu zohlobo inja liyokhala iwubuphukuphuku.
Njengomthetho, uma uphendula umbuzo kanjani ukuqamba puppy yakho, kutuswa ukuba banamathele le mithetho elandelayo: isidlaliso kumele kube obunobunye kunalokho emifushane (elinabantu eyodwa noma ezimbili amaqoqo) futhi ezifanayo umsindo nemiyalo eyisisekelo noma amagama amalungu omndeni.
Ake sihlole leli phuzu kabanzi. izidlaliso iDemo ngoba nomdlwana Kunconywa ukuba ukhethe isilwane ngoba kulula ukuyibona ngu indlebe. Izinja isamukele amagama eyodwa uhlamvu efana Rex, Jack, noma izidlaliso ezimbili ilunga ezifana Jacky, Alma. Kuleso simo, uma umnikazi uzimisele ukunikela isilwane sakho igama eside futhi engavamile, lapho kufanele ucabange version amancane, ezizosetshenziswa ekuphileni kwansuku zonke. Ngakho, Maximilian igama polysyllabic kungaba uzoguqulelwa emfushane - Max.
Kubhekwe izidlaliso okungalungile ukuthi uzwakale okusikhumbuza imiyalo ejwayelekile. Ngokwesibonelo, akudingekile ukubiza umdlwane noma Farks Siddhi. Inja abanakwethenjwa ngaso sonke isikhathi ukwenza ukuthi indlebe ezifuze amazwi Ukushaywa, ngakho lapho kungaba izinkinga phakathi izifundo isilwane.
It is hhayi Kunconywa ukusebenzisa isiteketiso ngoba izinja amagama abantu, njengoba kungaba senziwe sihambahamba nokungaqondi kungazwakali, lapho ushayela inja.
Uma uthola inja isithumbanja, umbuzo yini ukubiza umdlwane, njengoba umthetho, asivelanga. Ngale ndlela umntwana ngokubhaliswa ngokomthetho kule imibhalo of the isidlaliso. Yiqiniso, kuyenzeka ukuthi amagama anjalo kakhulu, kube yinqaba kakhulu, kodwa umnikazi akanayo ncamashi ushayele isilwane zabo ekuphileni kwabo kwansuku zonke. Kodwa isidlaliso olusemthethweni kungaba isisekelo "ekhaya" entsha igama inja. Ngokwesibonelo, ingxenye izidlaliso Imininingwane noma ngandlela-thile pereinachit ke, ngokukhetha samuntu ivumelane kakhulu futhi ezimnandi.
Nokho, zinike isikhathi igama ingane ngosuku lokuqala, wabonakala endlini. Buka isikhathi esithile sokuba umdlwane, babuze ukuthi yini ubuntu bakhe. Khona-ke umnikazi bakwazi ukukhetha igama efaneleke kakhulu isilwane sakho.
Omunye inothi wokugcina. Sekushiwo, ukuthi ushintshe igama inja is hhayi Kunconywa, kodwa ngezinye izikhathi kunezimo lapho kuyadingeka ukwenza ngokuphelele. Ngokwesibonelo, uma indlu kwaba kakade i inja omdala, ogama isidlaliso sebekubeke ungathandi abanikazi abasha. Noma uma ezisheshayo, igama le puppy sika wamenza ezingafanele. Ezimweni ezinjalo, yebo, abazikhathazi ngezithiyo, udinga nje ushintshe isiteketiso isilwane. Kodwa-ke, ngeke zikwazi ukuthi zenze njalo.